२ राजा १३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
दोस्रो राजा १३:१-२५
इस्राएलका राजा यहोअहाज (१-९)
इस्राएलका राजा यहोआस (१०-१३)
एलिसा यहोआसको जोस जाँच्छन्‌ (१४-१९)
एलिसाको मृत्यु हुन्छ; तिनका हड्डीहरू छोएर लास जिउँदो हुन्छ (२०, २१)
एलिसाको अन्तिम भविष्यवाणी पूरा हुन्छ (२२-२५)
१३ आहाज्याहका+ छोरा यहुदाका राजा यहोआसको शासनकालको २३ औँ वर्षमा+ येहुका+ छोरा यहोअहाज सामरियामा इस्राएलका राजा भए। तिनले १७ वर्ष शासन गरे। २ तिनले यहोवा परमेश्‍वरको नजरमा जे खराब छ, त्यही गरिरहे। नबातका छोरा यरोबामले इस्राएललाई जुन पाप गर्न लगाएका थिए,+ तिनले त्यो पाप गर्न छोडेनन्‌। ३ त्यसैले यहोवा परमेश्‍वरको क्रोध+ इस्राएलमाथि दन्क्यो।+ उहाँले तिनीहरूलाई सिरियाका राजा हाजाएलको+ हातमा अनि उनका छोरा बेन-हददको+ हातमा सुम्पनुभयो। इस्राएलीहरू लामो समयसम्म उनीहरूको अधीनमा बस्नुपऱ्‍यो। ४ केही समयपछि यहोअहाजले यहोवा परमेश्‍वरसित दयाको भीख मागे। यहोवा परमेश्‍वरले तिनको बिन्ती सुन्‍नुभयो किनकि सिरियाका राजाले इस्राएलमाथि गरेको अत्याचार उहाँले देख्नुभएको थियो।+ ५ त्यसैले यहोवा परमेश्‍वरले इस्राएललाई सिरियाको हातबाट छुटाउन एक जना उद्धारक नियुक्‍त गर्नुभयो।+ अनि इस्राएलीहरूले पहिलाजस्तै ढुक्क भएर जीवन बिताउन थाले। ६ (तर यरोबामको घरानाले इस्राएललाई जुन पाप गर्न लगाएको थियो, इस्राएलीहरूले त्यो पाप गर्न छोडेनन्‌;+ तिनीहरू त्यसैमा लागिरहे। सामरियाको पवित्र खामो*+ पनि हटाइएन।) ७ यहोअहाजसित सेनाको नाममा ५० घोडचढी, १० वटा रथ र १० हजार पैदल सिपाही मात्र थियो। किनकि सिरियाका राजाले तिनको सेनालाई खलाको भुसलाई जस्तै कुल्चीमिल्ची गरेर+ सखाप पारिदिएका थिए।+ ८ यहोअहाजको जीवनकालका बाँकी घटनाहरू, तिनको वीरता र तिनले गरेका सबै काम इस्राएलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्‌। ९ यहोअहाज आफ्ना पितृहरूसितै सुते र तिनलाई सामरियामा+ गाडियो। तिनीपछि तिनका छोरा यहोआस राजा भए। १० यहुदाका राजा यहोआसको शासनकालको ३७ औँ वर्षमा यहोअहाजका छोरा यहोआस+ सामरियामा इस्राएलका राजा भएका थिए। उनले १६ वर्ष शासन गरे। ११ उनले यहोवा परमेश्‍वरको नजरमा जे खराब छ, त्यही गरिरहे। नबातका छोरा यरोबामले इस्राएललाई जुन पाप गर्न लगाएका थिए, उनले त्यो पाप गर्न छोडेनन्‌;+ उनी त्यसैमा लागिरहे। १२ यहोआसको जीवनकालका बाँकी घटनाहरू, उनले गरेका सबै काम, उनको वीरता र उनले यहुदाका+ राजा अमस्याहसित गरेको लडाइँबारे इस्राएलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्‌। १३ यहोआस आफ्ना पितृहरूसितै सुते र उनीपछि यरोबाम*+ सिंहासनमा बसे। यहोआसलाई सामरियामा इस्राएलका राजाहरूको चिहानमा गाडियो।+ १४ एलिसा+ बिरामी भए र त्यही बिमारीले गर्दा तिनको मृत्यु भयो। एलिसा बिरामी भएको बेला इस्राएलका राजा यहोआस तिनीकहाँ आए र रुँदै यसो भन्‍न थाले: “हे बुबा! हे बुबा! इस्राएलका रथ र त्यसका घोडचढीहरू!”*+ १५ एलिसाले उनलाई भने: “धनु र काँड लिनुहोस्‌।” यहोआसले त्यसै गरे। १६ एलिसाले इस्राएलका राजालाई भने: “आफ्नो हातले धनु उचाल्नुहोस्‌।” राजाले धनु उचालेपछि एलिसाले आफ्नो हात उनको हातमाथि राखे। १७ तब एलिसाले भने: “पूर्वपट्टिको झ्याल खोल्नुहोस्‌।” राजाले झ्याल खोले। एलिसाले भने: “काँड हान्‍नुहोस्‌!” तब उनले काँड हाने। एलिसाले भने: “यो यहोवा परमेश्‍वरले दिनुहुने विजयको* काँड हो; सिरियामाथि विजय* दिने काँड! तपाईँले अफेकमा+ सिरियालाई सर्वनाश गर्नुहुनेछ।”* १८ एलिसाले अझै यसो भने: “काँडहरू लिनुहोस्‌।” राजाले काँडहरू लिए। तब एलिसाले इस्राएलका राजालाई भने: “भुईँमा काँड हान्‍नुहोस्‌।” राजाले भुईँमा तीन खेप काँड हाने अनि रोकिए। १९ यो देखेर साँचो परमेश्‍वरका सेवक क्रोधित भए अनि राजालाई यसो भने: “तपाईँले भुईँमा पाँच-छ खेप हान्‍नुपर्थ्यो! तब तपाईँले सिरियालाई सर्वनाश गर्न सक्नुहुने थियो। तर अब तपाईँले सिरियालाई तीन पटक मात्र हराउन सक्नुहुनेछ।”+ २० त्यसपछि एलिसाको मृत्यु भयो र तिनलाई गाडियो। हरेक चोटि नयाँ वर्ष लाग्दा* मोआबका लुटेरा दलहरू+ इस्राएलमा लुटपाट गर्न आउँथे। २१ एकपटक केही मानिस लास गाड्‌दै थिए। त्यसैबेला तिनीहरूले लुटेराहरूको दल आइरहेको देखे। त्यसैले तिनीहरूले त्यो लास एलिसाको चिहानमा फ्याँकेर भागे। एलिसाका हड्डीहरू छोएपछि त्यो लास जिउँदो भयो+ र उभियो। २२ यहोअहाजको शासनकालभरि सिरियाका राजा हाजाएलले+ इस्राएलमाथि+ अत्याचार गरिरहे। २३ तर यहोवा परमेश्‍वरले अब्राहाम,+ इसहाक+ र याकुबसित+ गरेको करारको खातिर इस्राएलीहरूमाथि दया देखाउनुभयो+ र तिनीहरूको ख्याल राख्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको विनाश गर्न चाहनुभएन। आजसम्म पनि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो नजरबाट हटाउनुभएको छैन। २४ सिरियाका राजा हाजाएलको मृत्युपछि तिनका छोरा बेन-हदद राजा भए। २५ त्यसपछि यहोअहाजका छोरा यहोआसले हाजाएलका छोरा बेन-हददबाट सबै सहर फिर्ता लिए। हाजाएलले यहोअहाजसित लडाइँ गरेर ती सहरहरू लिएका थिए। यहोआसले बेन-हददलाई तीन पटक लडाइँमा हराए+ र इस्राएलका सहरहरू फिर्ता लिए।
^ अर्थात्‌, यरोबाम द्वितीय।
^ यसले परमेश्‍वर वा उहाँका प्रतिनिधिहरूबाट सहायता पाऊँ भनी गरिएको बिन्तीलाई जनाएको हुन सक्छ।
^ वा “उद्धारको।”
^ वा “सिरियाबाट उद्धार।”
^ वा “हराउनुहुनेछ।”
^ यसले वसन्त ऋतुलाई जनाएको हुन सक्छ।
२ राजा १३